မျှတတဲ့ အပေးအယူ – Grab Love Story
တစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့အသိနဲ့ မကောင်းတာလုပ်ရန်အဆင်သင့်။ မျက်နှာမူရာမှာရှိတဲ့ တီဗီ ထဲကကိုယ်တုံးလုံး ဖိုမစုံတွဲရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ကာမစိတ်တွေတဟုန်ထိုးဆောင့် တက်လာရ၏။ လက်တစ်ဖက်ကလျော့တိလျော့ရဲ ပုဆိုးကြားမှာရှိတဲ့ ငယ်ပါလဗြောင်ကွတ်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားလျက်။ စနေကျောင်းပိတ်ရက်ပေမယ့် အဖေနှင့်အမေက အလှူအိမ်သွားလို့ ကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းအေးဆေး။ ”အောင်အောင်”တို့သားမိ သားဖ(၃)ဦးထဲ နေတဲ့ တိုက်ခန်းကအိပ်ခန်း(၂)ခန်းနှင့် ဧည့်ခန်း(၁)ခန်းအရှေ့မှာဝရံတာ ပီးတော့မီးဖိုခန်းရယ်။ တီဗီ ကဧည့်ခန်းမှာထားတာကြောင့် ရှိသမျှအပေါက်တွေရဲ့ တံခါးတွေကိုပိတ်ထားပီး မဟုတ်တရုပ်ကားကြည့်နေတာ။ အသံတိတ်ကြည့်နေရပေမယ့် ဆော်ကိုလေးဘက်ထောက် အနေအထားနဲ့ နောက်ကနေအသဲအသန် ဆောင့်ဆောင့်သွင်းနေတဲ့ ခွေးကုန်းပုံစံကိုကြည့်ရတာ အားရတယ်။ ဇာတ်လမ်းလည်းပြီးသွားရော ”အောင်အောင်”တစ်ယောက် ချုပ်တည်းထားတဲ့စိတ်တွေလွှတ်ဖို့အတွက် မီးဖိုခန်းရှိအိပ်သာထဲအပြေးဝင်ခဲ့သည်။
ဂွင်းတိုက်ပြီးအာသာဖြေတဲ့အခါ စိတ်မှန်းရင် ပိုပြီး ဖီးတက်သယောင်မဟုတ်လား? ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား ဘောဒီပုံစံ ပထမနှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ငယ်သူငယ်ချင်းမလေး ”ခိုင်နှင်း” ကို စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီး ပစ်မှားနေသည်။ သူမကတကယ်ကို စွဲဆောင်မှုရှိပြီး သူမကိုမြင်လျှင်စိတ်တွေထကြွတတ်သည်။ ပထမနှစ် ကျောင်းသူဟုမထင်ရက်စရာပင်။ သူရောဘာထူးလဲ? ပထမနှစ်ကျောင်းသားရဲ့ အဖိုအင်္ဂါတဲ့။ ကြည့်စမ်း (၅)လက်မခွဲကျော်ကျော် (၆)လက်မနီးပါးရှိ၏။ အခုချိန်ဆို ”ခိုင်နှင်း”ရောဘာလုပ်နေမယ်မသိ။ သူမကအပေါ်ဆုံးထပ်(၅)လွှာမှာနေတာ။ သူက(၄)လွှာသူမနဲ့ကပ်လျက်အောက်ထပ်။ အတွေးဘယ်လောက်ပဲနယ်ချဲ့ချဲ့ လက်ကတော့သူ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမရပ်ဘူး။ အရှိန်တက်လာစပြုတာမို့ မျက်လုံးလေးမှတ် အာရုံမှာ”ခိုင်နှင်း”က လေးဘက်လေးထောက် အနောက်ကသူနေရာယူလျက် အားကုန်စောင့်သွင်းနေတဲ့ ပုံရိပ်ကိုဖော်ကျူးနေတုန်း ”ဒုန်း ဒုန်း ဒုန်း ဒုန်း” ဆိုတဲ့အသံထွက်ပေါ်လာသည်။
”အာ” ဖီး ငုတ်သွားရတယ်။ အဆက်မပြတ်တံခါးကို အတင်းထုနေတာရပ်ဖို့ ထဖွင့်ပေးမှသာဖြစ်တော့မည်။ လက်ကိုရေဆွတ်ကာ တံခါးဖွင့်ပေးရန်ထွက်ခဲ့ရသည်။ ”ဟာ မိခိုင်ဘာလဲဟာ?” ဟုတ်ပါ့။တခြားသူမဟုတ်ဘူး။အပေါ်ထပ်က သူငယ်ချင်းမလေးရယ်။ ”ငါတစ်ယောက်တည်းပျင်းနေလို့ဟ”လို့ ပြန်ဖြေရပီးအထဲဝင်လာတယ်။ ”နင့်အိမ်ကလူတွေဘယ်သွားလို့လဲ?” “အဖေနှင့်အမေရွာသွားကြတယ်လေ။ ငါနဲ့တီလေးပဲကျန်ခဲ့တာကို တီလေးကမြို့ထဲသွားတယ်။” ”အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ငါဇိမ်ယူနေတာကို လာဖျက်တယ်ဆိုပါတော့” ”နင်ကလည်းဟာ့”ဆိုပီးနှုတ်ခမ်းလေးစူ ခန္ဓာလှုပ်ယမ်း ခြေဆောင့်နေတာကြောင့် သူ့ရင်အုံကြွလာကာ ယိမ်းနွှဲ့နေလေရဲ့။ နောက်ပီးတော့တံခါးပိတ်ရပ်နေတဲ့သူ့ကို ပွတ်တိုင်ပီးတီဗီအရှေ့ကဆိုဖာ ပေါ်သွားထိုင်လေရဲ့။ သူ့မနောက်ပိုင်းအလှကိုကြည့်မိရင်း အငယ်ကောင်ခေါင်းထောင်လာတယ်။ ဝတ်ထားတာကိုကြည့်ဦး။ စကတ်အတိုပွလေးကဒူးတောင်မဖုံးဘူး။ အပေါ်ကတီရှပ်ကျပ်ကျပ်လေး။ စကတိုကအပွပေမယ့်သူမတင်သားရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို မြင်ရတယ်။ ‘မဖြစ်ဘူး’တွေးကာအကြည့်ခွာပီး တံခါးပေါက်ပိတ်လိုက်သည်။
”နင်တစ်ယောက်ထဲဘာလုပ်နေတာလဲ?”တဲ့။ ”အခွေကြည့်နေတာလေ ပီးလို့ငါရေချိုးမလို့” ”ဘာကားလဲဟ?”။ဒီဟာမလေးတော့ အမှန်တိုင်းပြောရရင် မကောင်းဖြစ်တော့မယ်။ ”ဟာသကားပါဟာ……” ”နင်ခဏနေဦးဟာ ငါရေချိုးဦးမယ်”ပြောပီး ‘အောင်အောင်’အိပ်ခန်းထဲဝင် အပေါ်အင်္ကျီချွတ် အောက်ပိုင်းကဝတ်ထားတာတွေလည်းချွတ် ရေချိုးတဘက်ခါးစည်းလိုက်တော့ အရှိန်မသေသေးတဲ့ အငယ်ကောင်ဖောင်းနေတာပေါ့။ ‘မိခိုင်တွေ့လည်းဘာဖြစ်လဲကွာ ကြိုက်တောင်ကြိုက်နေဦးမယ်’လို့ စိတ်ထဲတွေးရင်းဧည့်ခန်းသို့ထွက်လာခဲ့တယ်။သူထွက်လာကာတံခါးဝရပ်နေတာကို ‘မိခိုင်’ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ပီး ဂျာနယ်ဖတ်နေရာကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေမို့အပေါ်ပိုင်းဗလာ ကိုယ်လုံးကို ‘မိခိုင်’မြင်လည်း ဘာမှစိတ်မလှုပ်ရှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူမအကြည့်တွေ အောက်ပိုင်းကိုဆက်သွားမိတော့ တွေ့လိုက်ရတဲ့ ‘အောင်အောင်’ ဂွကြားကဖောင်းကြွနေတာမြင်မိမှ ရင်တွေတလှပ်လှပ်ဖြစ်ရလေတယ်။
လက်တဖက်ကကိုင်ထားတဲ့ ဂျာနယ်တောင်လွတ်ကျသွားတယ်။ ‘အောင်အောင်’သူမဖြစ်ပုံကိုကြည့်ပီး ”ဟဲ့မိခိုင်တယောက်တည်းဘာဖြစ်?” ”ငါဘာဖြစ်နေလို့လဲ?”လို့ပြန်ဖြေပီး ဂျာနယ်ပြန်ချလိုက်ပြန်ကိုင်လိုက်နဲ့ ပိုပီးမူပျက်သွားတယ်။ ”မိုင်ခိ မိခိုင်ရယ် ငါပြောမှနင်ပိုစိုး….. မညာပါနဲ့ နင်ငါ့ရဲ့တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ ဘောဒီပုံစံ ကိုမြင်ပီး ရင်ခုန်သွားတာမဟုတ်လား?” ”အမယ်လေး ဖြစ်ရဦးမယ် ရုပ်ကြီးကိုကစပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ သွားစမ်းပါဟယ် ရေမြန်မြန်ချိုးချေတော့” ”ဟား ဟား အမှန်တွေပြောလိုက်လို့ ကောင်မလေးတယောက်ရှက်သွားပီ” ”တော်စမ်းပါ!”ပြောပီး မျက်စောင်းလှမ်းထိုးတယ်။ ‘အောင်အောင်’လည်းဘာမှမပြောတော့ပဲ အေးဆေးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလုပ်ရင်း ခါးထောင့်ကာရှေ့ကော့ကော့ပြနေတယ်။ ‘မိခိုင်’လည်း’အောင်အောင်’မမြင်အောင် ငေါငေါထွက်လာတဲ့ သူဟာကြီးကို လှမ်းပီးခိုးကြည့်နေမိတယ်။
ဖောင်းကားနေတဲ့အထုပ်ကိုကြည့်ရင်း’မိခိုင်’စိတ်တွေအရမ်းလှုပ်ရှားနေပီး တံတွေးတောင်မြိုချမိသေး။ ဒါကို’အောင်အောင်’တွေ့ပေမယ့်မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီးသူမရှေ့သွားကာသူမဆံပင်တွေကို လက်နဲ့ဖွရင်းနဲ့ ”ကဲ တီဗီ ကြည့်နေဦး! ငါရေချိုးလိုက်ဦးမယ်!”ပြောပီး ရေချိုးခန်းဘက်ထွက်သွားတော့မှ ‘မိခိုင်’သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။ ‘အောင်အောင်’တယောက် စောစောကချုပ်တည်းထားတဲ့စိတ်တွေကို ရေချိုးခန်းထဲရောက်တာနဲ့ လွှတ်ထုတ်ပစ်လိုက်ရင်း ဆွဖို့မလိုတဲ့အငယ်ကောင်ကို ဆပ်ပြာတွေတိုက်ကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း အားရပါးရဂွင်းတိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ ‘မိခိုင်’တယောက်ရင်တလှပ်လှပ်ခုန်နေတာ ပျောက်တော့မှ ဆိုဖာပေါ်ကထ တီဗီဖွင့် ဒီဗီဒီ ဖွင့်လိုက်သည်။ ‘အောင်အောင်’ကြည့်သွားတဲ့ အခွေဆက်ကြည့်တာမယ်တွေးပီး အခွေမထုတ်ပဲ ရီမုယူကာ ဆိုဖာပေါ်ပြန်ထိုင်လိုက်တယ်။ ”ဒီကောင် ဘာကားများကြည့်နေလဲမသိ”ဆိုတဲ့ အတွေးမဆုံးခင် တီဗီ မှာပေါ်လာတဲ့ ကိုယ်လုံးတီး ယောက်ျားကြီးနဲ့မိန်းမတယောက် လိင်ဆက်ဆံနေတာလည်းမြင်ရော ငြိမ်ကာစ စိတ်တွေထကြွလာပီး ”ဟာ ဒီနှာဘူးကောင် မဟုတ်တာကြည့်နေတာပဲ”အပြစ်ဆိုနေပေမယ့် မျက်လုံးတွေက ခွာနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ မိန်းမက ပေါင်ကိုဖြဲကားထာပီး ယောက်ျားကြီးက ပေါင်းကြားဝင်ဒူးထောက်က သူရဲ့လိင်တံကို မိန်းမရဲ့ဟာထဲထိုးသွင်းကာ အားရပါးရဆောင့်နေတယ်။ အနီးကပ်ကြီးရိုက်ပြထားတာဆိုတော့ အဝင်အထွက်တိုင်း ဟိုမိန်းမရဲ့ဟာရဲ့နှုတ်ခမ်းသားတွေ အလိပ်လိုက် အလိပ်လိုက် ဖြစ်နေပုံရယ် ကြီးမားတုတ်ခိုင်တဲ့ ယောက်ျားလိင်တံကြီးရယ်ကို တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ ‘မိခိုင်’ချက်ချင်းစိတ်တွေထကာ အတွင်းခံပေါ်စိုစိစိဖြစ်လာတဲ့ အရည်ကြည်တွေတောင်ထွက်နေလေရဲ့။ စိတ်တွေကယောက်ယှက်ခတ်နေပီး ဘာမှဂရုမစိုက်တော့ပဲ သူမစကပ်အောက်နေ သူမလက်တဖက်သွင်းပီး အတွင်းခံပေါ်မှတဆင့် သူမရဲ့ပိပိ ကိုပွတ်နေမိတယ်။
စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွင်းခံကြောင့် သူမရဲ့လက်နဲ့သူမပိပိတို့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်မရတာကို အလိုမကျဖြစ်လာတာမို အတွင်းခံကိုအတင်းဆွဲခွာကာပေါင်းခြားကပ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့မှလက်နဲ့ပိပိတိုက်ရိုက်ထိမိတယ်။ အမွှေးရေးရေးလေးတွေကိုပွတ် အကွဲကြားကိုလက်ညှိုးနဲ့ အပေါ်အောက်ဆွဲပွတ် တချက်ချက် အဖုအစိလေးကို လက်ညှိုးနဲ့လက်မသုံးဖျစ်ညှစ်သေးတယ် သူမအတွက်ဒီလိုလုပ်တာပထမဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ရေချိုးချိန် အိပ်ချိန်တွေမှာ စိတ်ထရင် အာသာဖြေနေကျပါ။ နောက်လက်တဖက်ကသူမရင်သားတွေကိုဆုပ်နှယ်နေပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မိုလည်းသူမ ဘောဒီ လှချက်က ဘယ်လိုမှမထင်ရက်စရာ။ နောက်သူမရဲ့တီလေးကလည်း အားကစားလိုက်စားတယ်လေ။ ပုရိသတွေခိုက်တဲ့ဘောဒီ အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူမရဲ့တီလေး လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေကြောင့်လည်းအခုလို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဘောဒီ ဖြစ်နေရတာပေါ့။ အပျိုဖော်ဝင်စ’ခိုင်လေး’ စိတ်ကစားနေတာကြာပါပီ။ သူငယ်ချင်းတွေကောင်းမှုကြောင့်ဒီလို စိတ်အာသာဖြေတတ်နေရတာလေ။
အခုတော့ တကိုယ်တော် လုပ်နေတာ အရှိန်ကတတ်နေပီ။ စကပ်ကပေါင်ပေါ်လှန်တင်နေပီ။ တီရှပ်ကလည်း နို့အုံပေါ်မှာ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်မိတော့ပါဘူး ရေချိုးခန်းထဲကရေသံကြားနေရသေးသရွေ့သူမဇိမ်ပါပါပွတ်နေဦးမှာပါ။ တီဗီထဲကလူနှစ်ယောက်ပွဲကြမ်းနေသလို သူမလည်းပွတ်ယုံတင်အားမရတော့လို့ လက်ညှိုးထိုးသွင်းလုပ်နေတယ်။ အရှိန်တွေမတရားတတ်လာရပီး မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်ကာ တီဗီထဲကလူကြီးဟာကိုမမြင်မိပဲ ‘အောင်အောင်’ရဲ့ဖောင်းကြွအောက်က ဟာကြီးကို စိတ်မှန်းကြည့်နေတယ်။ လက်ညှိုးအထိုးအသွင်းမြန်ဆန်လာပီး အားပါပါလာတော့ ပါးစပ်ကညည်းသံတွေထွက်လို့။ ”အား အီး အင့် အင့် ဟီး အီး”ဆိုတဲ့ အသံတိုးလေးညည်းကာသူမ ပီးသွားတယ်။ ပီးတာတောက်လက်ညှိုးကိုအပြင်မထုတ်ပဲ အတွင်းထဲစိမ်ထားပီးဇိမ်ယူနေသေး။ ရေသံကကြားနေရတုန်းပဲ။ ”ဟိုကောင်ကြာလိုက်တာ”တွေးပီး ”သူကြာနေတော့ငါကောင်းတာပါ့လေ”ပြန်တွေးပီးကြိတ်ရယ်နေမိတယ်။ ပီးတော့ လက်အပြင်ထုတ်ပီး အတွင်းခံနေရာမှန်ပြင်ပီးအပေါ်ကလက်ဝါးလေးအုပ်ထားတယ်။ လက်တဖက်ကအင်္ကျီဆွဲချလိုက်ပေမယ့် ကျန်တဖက်ကပွတ်သပ်နေသေးတာမို့ စကပ်ကလှန်နေတုန်း။ ”ဟဲ့ ‘မိခိုင်’ပီးသွားပီလား”ဆိုတဲ့အသံကြောင့် လန့်ဖျန့်ပီး တုပ်တုပ်မှမလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ ‘အောင်အောင်’တယောက်တိုက်ပီးရေချိုးတာခဏလေးပါ။ သူဆင်ထားတဲ့ဂွင်ထဲဝင်ရဲ့လားချောင်းကြည့်ချိန်မှာ’မိခိုင်’စကပ်စလှန်နေပီ။
ဆိုဖာကလက်ရန်းမပါတော့ ဘေးတိုက်မြင်နေရတယ်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေတာပီးတဲ့အထိပဲ။ စောစောကမှတိုက်ထားတဲ့အကောင်တောင်ငေါ့ထွက်နေပီ။ ” ……….”။ ‘မိခိုင်’ဆွံ့အ နေတယ်။ လက်ဖဝါးတောင် သူမရဲ့ဟာအပေါ်ဖုံးထားတာ ပြန်မရုတ်ရသေး။ ‘အောင်အောင်’လည်း သူမဘေးဝင်ထိုင်ရင်း လက်တဖက်က ပခုံးကိုဖတ်ပီကျန်တဖက်ကအတွင်းခံပေါ် အုပ်ထားတဲ့သူမလက်ပေါ်ထက်အုပ်လိုက်တယ်။ ”ဟဲ့ …အောင်…” ဆိုပီးနှုတ်ခမ်ဟယုံရှိသေး ‘အောင်အောင်”လည်း မျက်နှာချင်းအပ်ပီး နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ကာအနမ်ခြွေလိုက်တယ်။ ‘မိခိုင်’ဘာမှပြန်မပြောပဲ မျက်လုံးလေးပင်မှိတ်ပီးပြန်နမ်းနေသေးတော့ ‘အောင်အောင်’လည်း သူ့လက်ချောင်းတွေကို လှုပ်ရှားခိုင်းရတာပေါ့။ ‘မိခိုင်’ရဲ့အတွင်းခံကိုချွတ်တော့ အလိုက်တသိကြွပေးရင်း ‘အောင်အောင်’ခါးဝတ်ကိုသူမကပြန်ဖြေပီး’အောင်အောင်’အကောင်ကို လုပ်ဆောင်ပေးသေးတယ်။ ‘အောင်အောင်’လက်တဖက်က သူမ ပိပိထဲအထိုးအသွင်းလုပ်ရင်း ကျန်တဖက်က အင်္ကျီအောက်ကိုချွတ်နေတယ်။
အခန်းက အလုံလေ။ စိတ်လွတ်လက်လွတ်ပေါ့။ နှစ်ယောက်လုံးကိုယ်လုံးတီးတွေဖြစ်တဲ့အထိ စကားတခွန်းမှမပြောဖြစ်ကြပဲ လုပ်ဆောင်နေကြတာ။ ”အောင် …ရယ်… ငါ့တွေတမျိုးကြီး…” သူမစကားမဆုံးခင်မှာပဲ သူရဲ့အငယ်ကောင်ကိုလက်နဲ့စုပ်ကိုင်ရင်း ကျန်လက်တဖက် ‘မိခိုင်’ပေါင်ကိုအနည်းငယ်ထပ်ကားကာ သူမရဲ့ပိပိအဝကိုတေ့တေ့စိုင်စိုင်လုပ်ပီး ပွတ်ဆွဲ ကပ်ဆွဲလုပ်နေတယ်။ ”အီး အား ဟင်း ဟင်း”ဆိုတဲ့ ‘မိခိုင်’ရဲ့ညည်းညူသံသဲ့သဲ့ထွက်ပေါ်တယ်။ နောက်တော့ ‘မိခိုင်’မရိုးမရွဖြစ်လာပီး ”အောင်…ငါမနေနိုင်တော့ဘူးဟာ… ဘာလုပ်နေလဲ…ထည့်လိုက်တော့နော်…” ဒါတောင် ”အောင်အောင်”က ထိပ်ဖူးပိုင်းလေးမြုပ်ယုံသွင်းပီး ကလိနေသေးတယ်။ ‘မိခိုင်’ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့တာကြောင့် သူမလက်နှစ်ဖက်နဲ့ ”အောင်အောင်”ခါးကိုအတင်းဖက်ကာ ဆွဲကပ်လိုက်တော့တယ်။ ”အီးးး” ”အားး” နှစ်ယောက်စလုံးဆီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အသံပင်ဖြစ်သည်။ ‘အောင်အောင်’လည်းFeelကဆောင့်တတ်လာတာနဲ့တပြိုင်ပဲ သူ့ရဲ့ခါးကိုအားကုန်စိုက်ထုတ်ရင် စည်းချက်မှန်မှန် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပီး အသွင်းအထုတ်လုပ်နေတယ်။
”အီး အားး အား ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်စ် ကောင်းတယ် အောင် ရယ် ကောင်းတယ် ဆောင့် ဆောင့် နာ နာလေးနဲ့ အားပြင်းပြင်းလေး” ‘မိခိုင်’စိတ်ရဲ့စေလိုရာအတိုင်း ပြောတဲ့ စကားတွေထွက်လာလေရဲ့။ ဒီတော့ ”အောင်အောင်”လည်းစိတ်ရှိလက်ရှိ ဆောင့်လိုးကာ ” အေး အားး ကောင်းတယ်ဟာ ငါလည်း အရမ်းကောင်းနေပီ မိခိုင် နင့် အဖုတ်က ကျစ်ထုတ်နေတာ စီးစီးပိုးပိုးရှိတယ်ဟ အား ကောင်းလိုက်တာ မိခိုင် နင်ရော အောက်ကနေ ပြန်ကော့ပေးလေဟာ” ‘မိခိုင်’လည်းသူ့ပြောစကားအတိုင်း ကော့ပေးတာပေါ့။ ”ဖုတ် ဖုတ် ဘွတ် ဘွတ် ” အသံပေါင်းစုံပါပဲ။ ဆောင့်ချက်ပေါင်း ၈၀ ၉၀ကျော်တော့ မိခိုင် ပီးခါနီးလာပီလေ။ ”အောင် အောင် အရှိန်မလျော့နဲ့ ထပ်တင်ပီး အားကုန်ဆောင့်လိုးလိုး ငါ အရမ်းFeelတွေတက်လာပီဟ ငါ့အဖုတ်ကြီးပြဲရင်ပြဲသွားပစေ လိုး စမ်းပါ အတင်းဆောင့်လိုး အား အီး အီး ကောင်းတယ် ကောင်းလိုက်တာ အား အာ့ အား ရွှီး အား အွတ် ပီးပီ ထွက်ကုန်ပီ ငါ့ ဆောက်ရည်တွေထွက်ကုန်ပီး အီး ကောင်းတယ်ဟာ ဟူးး” မိခိုင်ကတော့ပီးသွားပီ။
ဒါပေမယ့် အောင်အောင်မပီးသေးတာကြောင့် မရပ်ပေးပဲ ဆောင့်လိုးနေဆဲပါ။ လိုးနေတာမှ အရှိန်ပြင်းပြင်းကိုလုပ်နေတာ။ သူကအခုမှအရှိန်တတ်လာတာလေ။ မကြာခင်သူလည်းပီးပါတော့မယ်။ ”မိခိုင် နင်ပီးပေမယ့် ငါမပီးသေးဘူးဟ ခဏလေးပါဟာနော် ငါလည်း ပီးတော့မယ်…မယ်” ”အေး ရတယ် ပီးအောင်လုပ် ” အပြန်အလှန်ပြောနေရင်း ”အောင်အောင်”ပီးခါနီး ဖီးလာ၏ဆိုသလို သူလက်နှစ်ဖက်က မိခိုင်ရဲ့လက်မောင်းတဖက်တချက်ကို ညှစ်စုပ်ပီးကို ဆောင့်လိုးနေရင်း ”အား ကောင်းလိုက်တာ မိခိုင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ ဟူးးး” သူလည်းပီးသွားကာ မိခိုင်ရဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာပေါ်မျက်နှာအပ်ကမိန်းနေလေရဲ့။ အောက်ပိုင်းကိုယ်ဆီကတော့ ချိတ်ဆက်ထားဆဲပါပဲ။ အငယ်ကောင်ကိုအငယ်မရဲ့အထဲမှာပဲစိမ်ထားပီးဇိမ်ယူနေလျက်။